I-Spring Bed Therapedic | Rayson
3 I-Zone Foam ne-Spring Hybrid Mattless
Lo matilasi ufaka umdwebo ophezulu wenduku, okwenza kubonakale muhle ngokwengeziwe. Ukuchuma kwegwebu okuvela kumatilasi kukuvimba ukuthi uzwe ukuthi iziphethu, futhi futhi lokhu kwenza abantu babe nokuhlangenwe nakho kokulala okuthe xaxa. Inhliziyo yesikhungo isekwe kusetshenziswa amagwebu wememori aphezulu aphezulu, athule futhi apholile. I-Memory Foam ekulweni kokushisa komzimba, kancane kancane ibe nethenda, ngenkathi kudla ingcindezi yomzimba womuntu ukulungisa umzimba endaweni ephelele kakhulu. Kungagculisa izidingo zamadoda nabesifazane abahlukahlukene.
Njalo ulwela ukubhekela phambili, iRayyson yathuthuke ukuba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amandla okucwaninga kwesayensi kanye nokuqeda amabhizinisi wenkonzo. Simise uMnyango Wezemisebenzi Amakhasimende ukuthi unikeze kangcono amakhasimende ngezinsizakalo ezisheshayo kufaka phakathi i-Order Tracking Isaziso. Umbhede wentwasahlobo namuhla, iRaysonon ibeka phezulu njengomhlinzeki ochwepheshe futhi onolwazi embonini. Singahle siklame, sithuthukise, sikhiqize, futhi sithengise uchungechunge lwemikhiqizo eyehlukene ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokunikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende kufaka phakathi ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q & A. Ungathola okuningi nge-Therapedic yethu entsha yomkhiqizo wentwasahlobo kanye nenkampani yethu ngokuxhumana ngqo ne-US.rayson ithola uchungechunge lwezinqubo zokubukwa kokuhlolwa. Zingumbala wendwangu, ukubukeka, ukufana kombala, kanye nokuhlanzeka kwemicu yokuthunga.